Mana barnootaa fi Hospitaala - Sheer Itiyoophiyaa
Mana barnootaa fi Hospitaala
Nuti kan ofii keenyaa qabna manneen barnootaa fi hospitaala Baatuu fi Adaamii Tulluu keessa. Kana waan ta’eefuu, hojjettoota keenya fi hawaasichaaf naannoo fayyaa qabeessa uumuuf nuti ogeessota fayyaa, narsootii fi barsiistoota ni barbaanna. Ijoolledhaaf barnoota kennuun guddina isaanii boruutiif bu’ura cimaa isaan qabachiisna.
Amaan Qaasiim / Daareektara itti aanaa Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sheer Baatuu keessaa
Ati Sheer Itiyoophiyaa keessatti yoom jalqabde?
Ani bara 2013 keessan Sheer keessa hojjechuu jalqabe.
Ani barsiisaa ta’een gara mana barumsaa dhufe. Ani waggootii sadi’iif barsiisee jira. Kanaan booda ani guddina argadheen itti aanaa daareektara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf ta’e.
Inni mana barumsaa baa’ee gaarii ta’ee dha. Inni barattoota gara 6500 kaffaltii malee barsiisa, fi daa’imman 1200 guyyaa guyyaadhan ni nyaachisa. Inni kun kan baay’isee nama boonsu dha. Mindaan/Miindaan koo osoo najalaa hin turiin yerootti naafkaffalama. Sababa kanaafii kanneen biroo hin tarreeffamneen, mana barumsaa Sheeriif hojjechuu koon naan boona.
Nuti barsiistoota fi meeshaalee baay’ee gaarii ta’an qabna, kanaafuu namoonni biroo yeroo iddoon hojii bana ta’e argametti akka as dhufan nan gorsa.
Sistar Maskaram Kabarkku / Qondaala Fayyaa
Ati hospitaala Sheer Itiyoophiyaa keessatti yoom jalqabde?
Ani jalqaba bara 2007 irrattin gara hospitaala sheer dhufe
Ani narsii ta’een hojii jalqabee sanaan booda gara sadarkaa qondaala fayyaatti guddadhe.
Ati maaliif hospitaala Sheerif hojjechuu barbaadde?
Inni hospitaala gaarii fi guddaa dippaartimentoota baay’ee, meeshaalee gaarii fi hiriyoota hojii gaarii qabuu dha. Hospitaalichi ogummaa koo dhugumatti kan keessummeessu dha.
Ati maaliif namoonni biroo hospitaala Sheer keessa akka hojjetan gorsitaal/gorsitaa?
Sababii tajaajilawwan adda addaa nuti kenninuutin. Sheer dhiyeessa fi meeshaalee irratti investii gochuu isaa ittuma fufa. Hospitaalota kanneen biroo waliin yoo ilaallamu kuni adda kan ta’e. Kanaafuu, dhugaa dha, yeroo iddoon hojii banaan argamutti ani hiriyoota koottin hima.
Read all about Giriinhaawusii fi Kenniinsa sadarkaa